Jalqaba uumamaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartiis in uume. ... dhirri abbaa fi haadha isaa in dhiisa, haadha manaa isaattis in maxxana.
Egaa isaan lama miti tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise, namni gargar hin baasin. Maarq 10:7-9
WKWOO gaa’illaaf iddoo ol aanaa qabdi. Gaa’illi dhiiraa fi dubartii gidduutti, abbaa manaa fi hadha manaa ta’uudhaan walitti hidhamanii, jireenya isaanii walgargaaranii jirachudha. Gaa'ila kan bu'uuressee waaqayyoo isa qulqulluu waan ta’eef ciisichi isaa illee qulqulluu fi hundee maatiin irraa latuuti. Gaa’elli abbaa fi haadha dhisaanii walitti maxxanudhaan tokkoo ta’anii jiraachuudha.
Gaa’illi, abbaa fi haadhaa duwwaa dhiisuu miti, waa’ee ofiis dhisuu dha. Namni uumamaan amalaa fi yaada adda addaa in qabaata. Haata’uu iyyuu malee anatu caalaa utuu hin jedhin, situ caala jechuudhaan yaadaa fi muuxannoo waliif hiruun gaa’ilicha guddisaa. Abbaan manaa fi haati manaa gaa’ila isaanii keessatti,walitti dhugaa dubbachuu, safuu abba manaa fi haadha mana ta’u eeguu, waliif abboomamaa fi ijoolleedhaa fi hawwasaf fakkeenya gaarii ta’anii mul’achudha.
Barri nuti keessa jirru kun bara namooti baayyeen gaa’ilaatti iddoo itti hin lannee dha. Karaa tokkon fudhaa fi heerumnii kara gadi dhiisee; saalii isaanii tokko ta’ee , dhiraa fi dhiraa gidduti, dubartii fi dubartii gidduutti geggeefama jira. Kara biraa immoo rakkoolee adda addaatu warra gaa’ila isaanii hundeefatan giddutti mul’achaa jira. Mirga dhala namaa fi umamaan kennaameefitti garmaalee waa’ee ba’udhaan, anatu caalaadhan ,amantii ganuudhaan, rakkoolee adda addaa umuudhaan gaai’lli digamaa, walitti dhuffeenyi maattii lamaanii hin hafaa, seerri Waldaan kristiyaanaa qabduu sarbamaa, safuu gaa’illi qabu kabajaa dhabaa jira.
Ijoollotti jeqamssaa maatti keessatti dhalatan, jaalallii maatii mal akka ta’ee utuu hinbarin jibbaan, gadii dhisiidhan, gara jabinaan guddatu. Naamusa, kaayyoo fi itti gala isaanii hinbeekan. Kun immoo hawaasatti, mootummaa fi biiyyatti ba’aa dha.
Kanaafuu waldaan kristiyaanaa warra wangeela Oromoo Osloo kana hubannaa keessa galchuudhaan gaa’ela waaqayyo dhaabe ulfina akka argatuuf tumsa irraa barbaachisu hundaa in gooti. Namoota akka sagalee Waaqayyootti mana dhaabachuu fedhan hundaas sirna isaa in mijeessitiif.